sesamol （533-31-3 factory factorylọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe
Sesamol bụ ihe dị n'okike na-ahụ eke, lignan bụ ihe dị mkpa, ewepụtara na sesame (sesame) na mmanụ sesame; na nkezi ọdịnaya nke sesame bụ sistem kachasị elu, ọ bụ ihe na-acha ọcha kristal siri ike, Bụ ihe si na phenol. Ọ bụ ubé soluble na mmiri, mana miscible na ọtụtụ mmanụ ..
Sesamol powder Ozi ala
aha Sesamol ntụ ntụ
Oke molar 138.12 g / mol
Melt Point 62 ka 65 Celsius C (144 ka 149 ° F; 335 ka 338 K)
molekụla Formula C7H6O3
esi ebe 21 ruo 127 ° C (250 ruo 261 ° F; 394 ruo 400 K) na 5
Sesamol bụ ihe sitere n'okike nke phenol dị na mmanụ sesame esichara na mkpụrụ osisi sesame a roara n'ọkụ. Sesamol (CAS 533-31-3) a na-ahụta dị ka isi ihe dị ike nke nwere mmanụ sesame nke na-ekere òkè na ọgwụgwọ ya.
Sesame (Sesamum indicum) bụ mmanụ dị mkpa na ezinụlọ Pedaliaceae. A na-ahụta ya dịka otu n'ime mmanụ kacha ochie nke mmadụ maara ma jiri ya mee ihe maka ọ bụghị naanị uru ya bara uru kamakwa uru ọgwụgwọ. Akụkụ ndị dị mkpa nke sesame na-enye ọgwụgwọ na-agwọ ọrịa bụ akwụkwọ na mmanụ mkpụrụ.
A na-achọta ngwongwo Sesamol 533-31-3 na akara aka karịa ndị ọzọ lignin ogige nke mmanụ sesame, sesamin na sesamolin. Mmiri a nwere ike ịgbanye mmiri dị ka ezigbo antioxidant.
Olee otu sesamol work?
Sesamol na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche iji nye ya nnukwu ọgwụgwọ uru dị ka neuroprotection, antioxidant mmetụta, mgbochi mkpali, mgbochi akpụ, mgbochi radieshon na radikal scavenging mmetụta.
N'okpuru bụ ụfọdụ ụdịdị nke sesamol na-arụ ọrụ iji nweta mmetụta ndị ahụ;
I. Na-egbochi mmebi DNA site na nrụgide oxidative
Sesamol nwere ike igbochi mmebi DNA site na nrụgide radieshon. Ionizing radieshon na-akpata mmebi nke DNA cellular site na ịmịnye abromration chromosomal na micronuclei na mkpụrụ ndụ na-amụba.
II. Na-akpali ọrụ nke antioxidants dị mkpa
Sesamol na-arụ ọrụ site na ịhazi ihe omume nke enzymes antioxidant dị mkpa dị ka catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), na glutathione peroxidase (GPx), nke na-esonyere ọkwa dị elu nke mbelata glutathione (GSH). Ndị enzymes ndị a na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji gbochie mmebi cellular site na ndị na-eme ihe ike.
III. Na-egbochi pro-apoptotic protein na-eme ka cell viability
Pro-apoptotic protein bụ protein na-akwalite ọnwụ cell. Ha gụnyere p53, caspase-3, PARP, na Bad enzymes. Ndị enzymes ndị a na-etinye aka na ọnwu sịnịma etinyere na ya nwere ike belata ịdị ndụ cell
Egosiputara Sesamol iji kwalite ịdị ndụ cell site na igbochi ọrụ nke pro-apoptotic enzymes.
IV. Mgbochi nke lipid peroxidation
Peroxidation Lipid bụ ụdị mmebi lipid na-eme n'ihi ọxịdashọn. Nke a na - eweta aldehydes na - arụ ọrụ, dị ka malondialdehyde (MDA) na 4-hydroxynonenal (HNE) nke na - akpata mmebi sel. Egosiputala Sesamol iji gbochie lipid peroxidation na-enye nchekwa na sel.
V. Na-egbochi ọgbọ nke free radical gụnyere hydroxyl radicals
Egwu efu bụ ogige na-ejighị n'aka nke metụtara ọrịa na ịka nká. Hydroxyl radicals bụ oxidants kachasị ike nke na-ebute ọrịa.
Sesamol na-ebelata ọgbọ nke usoro ihe efu gụnyere hydroxyl, α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (NXH), na ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) dị egwu.
VI. Emeziwanye ihe mmegharị ahụ
Na mgbakwunye na igbochi ọgbọ nke free radicals, sesamol nwere ike ikpochapụ ihe ndị dị ka hydroxyl, lipid peroxyl na tryptophanyl radicals.
VII. Mwepu nke mkpụrụ ndụ mkpali
Sesamol na-egbochi ụzọ mgbaàmà metụtara imepụta ụdị ihe na-eme ihe na-ebelata mmeghachi iwe.
Nke Asatọ. Na-ebelata cytokines na-afụ ụfụ (TNFα, IL-1β, na IL-6)
Nitric oxide, nke iNOS mepụtara, na-eduga na mbufụt site na mkpali cytokines na-akpali akpali, dị ka TNFα, na ime ka nzaghachi na-egbuke egbuke. Sesamol nwere ikike igbochi ntọhapụ nke TNFα na IL-1β.
IX. Ijide uto nke sel na usoro dị iche iche
Egosiputara Sesamol iji mee ka mkpochi sel n’usoro uto sel di iche iche gunyere usoro S na G0 / G1. Njirimara Sesamol mgbochi ọrịa kansa na - enyere aka, dịka ọmụmaatụ, belata uto mkpụrụ ndụ cancer.
X. Ebugharị ụzọ caspase
Caspases bụ enzymes nke metụtara ọnwụ cell. Egosiputara Sesamol iji mee ka uzo ndi a gha eme ka mmadu ghara idi ndu.
XI. Na-etinye apoptosis site na ụzọ na-apụ apụ
Apoptosis bụ usoro ọmụmụ ihe na - eme ka ọnwụ mkpụrụ ndụ ahaziri. Ọ bụ usoro dị mkpa dịka ọ na - enyere ahụ aka iwepu mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ.
Sesamol na - ebute apoptosis n'ụzọ abụọ dị iche iche, ụzọ dị egwu na nke mpụga.
XII. Ndị na-asụ Hind mitochondrial autophagy
Mitochondrial autophagy bụ ụdị mbibi nke na-enyere aka iwepụ mitochondria nkwarụ.
Mgbe sesamol na-egbochi usoro a, mgbe ahụ apoptosis na-emetụta.
XIII. Belata nitrite na neutrophil ọkwa
Nitrites na neutrophils na-ekere òkè na nzaghachi mkpali. Ha na-etinye aka na ntọhapụ nke nitric oxide nke na-ebute nzaghachi nke mkpali site na iwebata ma ọ bụ na-egbochi mbufụt.
Sesamol na-arụ ọrụ dị ka onye na-egbochi mkpali site na mbenata ogo nke nitrites na neutrophils.
Gịnị bụ sesamol eji?
A na-eji Sesamol mee ọtụtụ uru ahụike gụnyere;
m. Ọbara mgbali elu.
A na-eji mmanụ Sesame tinyere ọgwụ ole na ole na-arịa ọbara mgbali dị ka ọgwụ a nwapụtara iji belata ọbara mgbali.
Nnyocha sara mbara banyere mmanụ sesame na-egosi na sesamol na sesamin (lignans dị na mmanụ sesame) na-ekere òkè dị ukwuu n'ịchịkwa ọbara mgbali. Iwere mmanụ sesame, jiri ya sie nri, maka izu atọ na-ebelata ọbara mgbali maka ndị nwere ọbara mgbali elu nkịtị.
N'oge nyocha ahụ, ndị ọrụ ahụike doro otu ndị ọrịa hypertensive ọgwụ (Procardia, Nefedica na Adelta) maka oge 21. Ọ bụ ezie na ọ na-belatatụ ọbara mgbali ha, ọ dịghị ka o kwesịrị. Ejiri mmanụ Sesame mee ihe dị ka ọgwụ ndị ọzọ, ndị ọrịa ahụ anwalekwa otu oge ahụ. Ihe si na ya pụta bụ na ọbara mgbali elu ha adabala n'ọnọdụ nkịtị.
Ndị dọkịta rụrụ ụka na nsonaazụ ahụ nyere nnukwu onyinye site n'ọtụtụ dị elu nke sesamol na sesamin dị na mmanụ sesame esiri esi. Ọ bụrụ na achọpụta na itinye mmanụ sesame na nri maka ndị nwere ọbara mgbali elu nwere ike ịdị irè karịa ịmịnye ha ọgwụ.
Nsonaazụ ndị a kọọrọ ndị American Heart Association n'oge nzukọ kwa afọ nke Inter-American Society of Hypertension site n'aka Prọfesọ Devarajan Sankar nke Mahadum Annamalai, India.
ii. Mgbochi na eriri afọ.
Nnyocha e mere banyere mmetụta sesamol na eriri afọ na-egosi na ọ pụrụ ịka mma karịa ọgwụ aspirin. Na nyocha banyere ulcerative colitis, IBD (ọrịa ogbu na nkwonkwo), nke na-emebi anụ ahụ mucosal site na dysregulating sistemụ ahụ na-egbu egbu. N'ime nnyocha metụtara oke, a hụrụ sesamol iji belata ọrụ nke enzymes na-akpata mbufụt.
Ọ bụ ezie na ọgwụ aspirin maara nke ọma na-egbu nsogbu mbufụt mgbe a riri ya, ọ nwere ike ibute ọgbụgba ọnya na ojiji ogologo oge. Pụ Ọgwụ Aspirin si akpata mmebi nke gastroduedonal site na ịkpụchi mkpụrụ ndụ.
Nnyocha ndị ọzọ na-egosi na intubation nke sesamol nke nasogastric na ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na obere eriri afọ yana nlekọta na-eme ka ohere ịnweta ịwa ahụ belata.
iii. Ọrịa obi.
Ihe ize ndụ ndị ọrịa obi na-ekwu nwere nnukwu akụkụ na ọnwụ na nsogbu ụwa. Ha nwere ike ibute nrụgide oxidative ma ọ bụrụ na enweghị ọgwụgwọ na-akawanye njọ na ntinye na pf reactive oxygen, gụnyere usoro nchedo antioxidant agbagọ.
Sesamol na-eji ihe mgbochi anti-oxidative ya eme ihe na-egbochi atherosclectoric cardiovascular ọrịa ihe egwu dị ka hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, mgbatị dị elu nke obere cholesterol lipoprotein na obere lipoprotein dị elu.
Nnyocha ndị ọzọ kwubiri na sesamol nwere akpụkpọ ahụ na-eme ka ahụ sie ike ma na-ebelata nsị. Ọzọkwa, ọ na-enye myocardium nchedo ọrịa cardiomyopathy nke DOX kpatara.
IV. Uto nwata.
A na-eji Sesamol n'ọtụtụ akụkụ nke mmepe ụmụaka. N'ime ihe ọmụmụ dị iche iche, a na-akpọ sesamol iji belata ADHD na ụmụaka nwere isi mgbaka dị ntakịrị ma ọ bụrụ na ejiri ya obere. Ọnọdụ DHA na-ahụkarị ụmụaka nwere ADHD.
N'ime ihe nyocha iri na-egosi uru dị mma na mgbaàmà ADHA gụnyere ịgụ okwu, impulsivity, mmụta anya, ncheta ọrụ, na ịmị mkpụrụ.
Antsmụaka a taara mmanụ sesame ruo izu anọ depụtara uto na arụ ọrụ nke ọma.
v. Ọrịa shuga.
Sesamol na-arụ ọrụ nke ọma dịka mgbakwunye maka ọgwụ ọria mamịrị iji belata ogo shuga n'ọbara ngwa ngwa. Nara ihe mgbakwunye sesamol ma ọ bụ na-agbanwe na nri mmanụ sesame mgbe ị na-a drugsụ ọgwụ shuga na-enye mkpụrụ ka mma maka ọrụ ahụ.
N’ọtụtụ nyocha, ọtụtụ ndị metụtara ndị ọrịa ụdị ọrịa shuga abụọ, sesamol egosipụtawo nsonaazụ dị ukwuu. Otu n'ime ọmụmụ ihe metụtara otu atọ, nke ọ bụla na-arịa ọrịa shuga nke ụdị 2. Otu n'ime ha doro sesamol naanị, ọgwụ ọzọ nke ọgwụ glibenclamide (Glyburide) kwa ụbọchị, nke ikpeazụ bụrụ sesamol na Glyburide ruo ihe dị ka izu 2.
A kọọrọ Sesamol na ya nwere mmetụta synergetic na glyburide, n'ihi na ọgwụgwọ agwakọtarala hemoglobin A1c na ogo shuga nke ọma, ma dị mma karịa otu usoro ọgwụgwọ otu.
Hyperlipidemia. Ndị ọrụ nyocha na-akọ na sesamol e ji agbara cholesterol na ihe ndị ọzọ dị n’ọbara arụpụta ezigbo ihe. N'ime ule ihe nlere, a nwalere irè nke sesamol maka nri na-abụba-na-akpata hyperlipidemia, ọrịa na-adịghị ala ala, hypercholesterolemia, na nnukwu hyperlipidemia.
Mbelata nke triacylglycerol dị ka nsonaazụ njedebe na-atụ aro na sesamol na-ebelata absorption triacylglycerol. A na-ejikwa Sesamol weghachite ọkwa cholesterol dị elu.
Nnyocha na-egosi na mgbakwunye sesamol na-eme ka excretion nke cholesterol na-ebelata nsị ya.
Isii Ọrịa Metabolic na oke ibu.
A na-akọ Sesamol ịnwe ikike dị iche iche nke ndu gụnyere ike ịlaghachi oke ibu na ọrịa metabolic. A na-akọ na ọ nwere ike igbochi mmetụta oke ibu.
Nnyocha emere iji nwalee etu sesamol si arụ ọrụ nke ukwuu na oke ibu, achọpụtara na ọ nwere ike idozi metabolism hepatic metabolism. Nke a mechara meziwanye insulin ma mee ka ọnwụ dịkwuo elu. Ibu na nsogbu nke metabolic metụtara ya na njikọ nke lipid n'ime ahụ. Mbelata ụba pụtara na-agbanwe oke ibu.
Sesamol were enwekwu lipolysis, ọdụdụ acid ọxịdashọn na Mbelata ọnụego nke ịba ọcha n'anya lipogenesis, ihe ndị dị mkpa na ẹsụhọde lipid ìgwè. Ihe omume ndị a (ya bụ, lipid uptake, synthesis na catabolism) bụ ọtụtụ n'ime ihe na-eme n'ime imeju.
Ndị mmadụ na-eji sesamol akọ akụkọ profaịlụ hepatic na ọbara lipids ka mma, yana mee ka insulin nwee mmetụta.
vii. Ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo, Osteoarthritis, na osteoporosis.
Ọ bụ ezie na ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo, ọrịa na-egbu mgbu na-adịghị ala ala, nwere ọtụtụ ọgwụgwọ ọgwụ, iji ha eme ihe ogologo oge na-abụkarị hepatotoxic. Sesamol nwere ike bụrụ ihe eji agwọ ọrịa. Nnyocha ndị na-enyocha otu ihe ahụ kwuru na sesamol nwere mmetụta na-egbochi ọrịa ogbu na nkwonkwo nke na-emeziwanye mmetụta nke ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Osteoarthritis bụ isi ihe na-akpata ihe mgbu na nkwonkwo, nke e mere atụmatụ imetụta ihe dịka 15% nke ọnụ ọgụgụ ụwa. Otú ọ dị, nrụgide Oxidative nwere akụkụ dị ukwuu na nkwarụ akwara ọkpụkpụ. Nnyocha banyere mmetụta nke sesamol na ọrịa ogbu na nkwonkwo nke metụtara ọrịa ogbu na nkwonkwo gosiri na ị na-ewere mgbakwunye sesamol maka otu izu nwere ike belata ihe mgbu ahụ. Nke a sitere na sesamol na-akpata nrụgide oxidative.
Ndị ọkà mmụta sayensị kwubiri na usoro yiri nke a na-eme ka ọkpụkpụ osteoporosis na-aga n'ihu na-akpata ovariectomy, bụ ebe ọkpụkpụ na-aga n'ihu na ike ọkpụkpụ. Ya mere achọpụtara na ọkpụkpụ na-atụkarị ụjọ na estrogen. A na - akọ Sesamol ka ọ jikọta ndị na - anabata estrogen ma mee ka mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ na - anabata estrogen. Mmetụta bara uru na-akwalite ike ọkpụkpụ site na ịmepụta protein nke matriks ọkpụkpụ.
viii. Ọrịa Alzheimer, nchegbu na ọrịa strok.
Ọrịa Alzheimer bụ nkwarụ ụbụrụ na-aga n'ihu na-ekwu na ụbụrụ ụbụrụ na-emebi. Ọ na - ekpochapụ nnwere onwe nke uche nke ndị ahụ metụtara. Achọpụtawo mmetụta na-adịghị emetụta sesamol na-ekwe nkwa. Emere ihe omumu iji gosiputa ike ogwu nke sesamol na epilepsy, onodu jikotara ya na enweghi obi ojoo na nchekota. Nnyocha ahụ kwubiri na sesamol nwere mmetụta ameliorative megide ọrịa strok, mmerụ ahụ, njigide, na nrụgide oxidative. Sesamol maka ọgwụ antiepileptic nwere ike ịba uru.
[a]. Sesamol Ọgwụ mgbochi mmetụta
Nsogbu na-akpata Oxidative na-apụta mgbe enweghị nrụpụta na mmepụta ihe na-akpata n'efu na antioxidants n'ime ahụ. Nke a na - edugakarị na mbibi mkpụrụ ndụ na ihe na - akpata oxyidative dịka ihe kpatara ọtụtụ nsogbu.
Mmetụta Oxidative bụ usoro usoro ahụike nke na-eduga n'ịka nká.
Antioxidants n’aka nke ọzọ bụ ihe na-egbochi mmebi nke mkpụrụ ndụ site na free radicals. Ha na-akpọkarị free radicals scavengers.
Sesamol bụ ihe kachasị nwere ike na mmanụ antioxidant nke mmanụ sesame. Ọ na-arụ ọrụ site na usoro dị iche iche iji nyefee nsonaazụ antioxidant. Usoro omume ndị a gụnyere nhazi nke ọrụ antioxidant dị mkpa, nchedo DNA site na mmebi radieshon, ịgbanye radical free, igbochi peroxidation lipid, na nchebe site na radieshon ultraviolet.
Ihe omumu nke na achoputa ihe omuma nke sesamol megide irradiation gamma na DNA. A na-ebute mmebi DNA site na ịmebata otu nkwụsị ma ọ bụ okpukpu abụọ site na ọgbọ nke ụdị oxygen na-arụ ọrụ.
Achọpụtara Sesamol iji gbochie nkwụsịtụ DNA dị otu otu. O belatara ogo nke ihe eji akwụ ụgwọ bụ hydroxyl, DPPH, na ABTS, bụ ndị jikọtara ha niile na ntinye etinyere n'otu ma ọ bụ okpukpu abụọ.
[b]. Sesamol Ọgwụ mgbochi uru
Mbufụt bụ usoro usoro ọgwụgwọ nke anụ ahụ na-arụ iji buso ndị ọrụ ala ọzọ ọgụ dị ka nje bacteria, fungi, ma ọ bụ ọbụna mmerụ ahụ. Agbanyeghị, mbufụt na-adịghị ala ala na-emerụ ahụ n'ihi na ọ na-ebute nsogbu dị iche iche.
Ndị na-egbochi ọrịa mkpali na-enyere aka ichebe ahụ site na mmebi site na ịlụ ọgụ mbufụt. Sesamol na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche iji nye nsonaazụ mgbochi mkpali. Zọ omume a gụnyere igbochi mkpụrụ ndụ na-egbu egbu, na-ebelata mmepụta nitrites yana igbochi ọrụ na ụzọ mkpali.
N'ime nyocha nke oke na lipopolysaccharide LPS kpatara mmerụ ngụgụ, a chọpụtara sesamol iji gbochie cytokines na-egbu egbu yana gbochie mmepụta nke nitric oxide na prostaglandin E2 (PGE2). A chọpụtakwara Sesamol ka ọ na-achịkwa nkwado ọrụ adenosine monophosphate na-arụ ọrụ (AMPK). Nke a na-enyere aka igbochi mbufụt ma belata mbibi cell.
[c]. Sesamol mgbochi ọrịa kansa mmetụta
Sesamol nwere akụrụngwa nke na - enyere aka ịlụ ọgụ mkpụrụ ndụ kansa gụnyere igbochi proliferative site na usoro dị iche iche dịka igbochi ikike nke akpụkpọ ahụ, ijide uto sel na ọkwa dị iche iche yana iwe apoptosis.
N'ime nnyocha metụtara DLD-1 eriri mkpụrụ ndụ cancer mkpụrụ ndụ, ejiri sesamol mee ihe na ọgwụ nke 12.5-100 μM. Achọpụtara na ọrụ ntụgharị ederede COX-2 belatara site na 50%.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, a chọpụtara sesamol nke eji eme ihe dị elu nke 0.5-10 mM iji kpalite apoptosis na HCT116 site na ịba ụba oxygen (intracellular reactive oxygen) (O2 • -) n'ụkpụrụ dabere na dose. Nke a dugara na mmalite nke ụzọ mgbaàmà JNK nke na-agba ume mmebi mitochondrial. Nke a na nsonaazụ ya na mwepụta nke cytochrome c nke mechara rụọ ọrụ caspase si otú a na-ebute apoptosis.
[d]. Seasomol Mgbochi mutagenic mmetụta
Mutagenicity na-ezo aka na ikike nke onye ọrụ (mutagen) ime ka mmụba. Mgbanwe nke bụ ngbanwe nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike ibute mmebi sel ma chee na ọ ga-akpata ụfọdụ ọrịa dịka ọrịa kansa.
Egosiputala Sesamol inwe ikike mgbochi mutagenic. A na - ekwu na uru mgbochi mgbochi mutagenic na ọrụ antioxidant yana ike ịchụpụ ihe ndị na-adịghị akwụ ụgwọ.
N'ime nnyocha, ọgbọ nke ikuku oxygen sitere na tert-butylhydroperoxide (t-BOOH) ma ọ bụ hydrogen peroxide (H2O2) na-ebute mutagenicity. Achọpụtara Sesamol ka ọ nwee mmetụta mgbochi mgbochi mutagenic siri ike na nsogbu Ames tester stra100 TA102 na TA102. A maara nje TA100 dị ka nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ ụdị oxygen. E gosipụtara Sesamol na igbochi mutagenicity nke sodium azide (Na-azide) na nje nje TAXNUMX.
[e]. Sesamol nchedo site na radieshon
Radieshon na-ezo aka ike na-aga n'ụdị ebili mmiri ma ọ bụ irighiri akwara. Radies nwere ike ịbelata n'ụba na gburugburu ebe obibi anyị. Otú ọ dị, radiation radiation nwere ike ịbụ ihe na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na a chịkwaghị ya. Obere oge ekpughere radieshon nwere ike ibute nnukwu ọrịa dị ka ọrịa radieshon na ntachu anyanwụ.
Ogologo oge ikpughe na radieshon na-akpata nsogbu ndị ka njọ gụnyere kansa na ọrịa obi.
N'ime nyocha nke ụmụ oke nwere mmerụ DNA na-ebute radieshon, a tụlere sesamol maka ọrụ nchekwa ya na radieshon. Nlekọta nke ụmụ oke na sesamol rụpụtara nchebe megide mmebi DNA na-akpata radieshon.
[f]. Nchedo obi
A kọọrọ Sesamol ka ọ na-echekwa obi obi pụọ na mmerụ ahụ.
N'ime nnyocha iji nyochaa ikike nchebe nke sesamol megide mmerụ ahụ myocardial, a na-eme ọgwụgwọ sesamol na (50 mg / kg) maka ụbọchị 7 tupu oge ịwa ahụ.
Ọmụmụ ihe a chọpụtara na sesamol belatara nha infarct, jiri ihe nrịbama obi, gbochie lipid peroxidation, infropration neutrophil yana bulie antioxidants larịị.Ọ kọrọ na sesamol ntụ ntụ na-eduga na mbelata mkpụrụ ndụ ihe na-afụ ụfụ, Caspase-3 protein apoptotic , ma mekwawanye ka ọrụ nke protein apocotic Bcl-2.
[ị]. Sesamol Free radicals scavenging
Free radicals bụ ejighị n'aka atọm nke na-adị mfe inweta electrons site na atọm ndị ọzọ. Ha bara uru ma na-egbu egbu na-adabere na itinye uche ha. N'ebe dị ala, ndị na-eme ihe na-adịghị akwụ ụgwọ na-ekere òkè na nzaghachi ahụ, n'agbanyeghị, mgbe uche ha dị elu, ha na-emerụ ahụ. Ndị nwere onwe ha na-emepụta nrụgide oxidative nke nwere ike imebi mkpụrụ ndụ ma nwee ike ibute ọtụtụ nsogbu na-adịghị ala ala na ọrịa nhụjuanya dịka kansa, ọrịa obi, na ogbu na nkwonkwo, cataract, na ọrịa neurodegenerative.
Ahụ anyị na-egbochi mmetụta nke nrụgide oxidative site na ịmepụta antioxidants ma ha nwere ike ọ gaghị ezu ma chọọ mgbakwunye site na nri ma ọ bụ mgbakwunye.
Sesamol nwere 'ikike igbochi nguzobe nke ihe na-akpata nnwere onwe yana ikpochapụ ndị nweere onwe ha.
N'ime nnyocha metụtara mkpụrụ ndụ mmadụ nke dermal fibroblast nke okenye (HDFa) kpughere na UVB, a na-enyocha ọgwụgwọ sesamol megide cytotoxicity, mkpụrụ ndụ oxygen na-eme ihe na-arụ ọrụ n'ime ROS, lipid peroxidation, ọnọdụ antioxidant, na mmebi DNA oxidative. Achọpụtara Sesamol iji belata peroxidation lipid, cytotoxicity, ROS intracellular, na mmebi DNA nke na-egbu egbu na mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ mmadụ. Ewere nke a na ikike nke mgbakwunye sesamol iji wepu ROS.
Otu nnyocha ahụ kọrọ na arụ ọrụ enzymatic na-abụghị nke enzymatic nke na-eme ka arụ ọrụ antioxidant ka mma.
[h]. Na-ebelata cholesterol dị n’ọbara
Ọbara cholesterol dị ka abụba, waxy dị n'ahụ gị. Ahụ dị ya mkpa iji wuo sel ndị dị mma mana n 'ọnụ ọgụgụ kwesịrị ekwesị. A na-ebu cholesterol na ụdị abụọ nke lipoproteins, obere-njupụta, na elu-njupụta. N'ihi ya, ọ na-eweta ụdị kọlestrọl abụọ, obere cholesterol lipoprotein (LDL), na cholesterol nwere oke ibu (HDL).
A na-akpọ LDL dị ka cholesterol ọjọọ ebe ọ bụ na LDL dị elu mee ka i nwekwuo nsogbu nke akwara akwara na oria ndi ozo.
Sesamol nwere ike ibelata ogo nke kọlestrọl yana ọkwa nke triacylglycerol na ahụ.
Na nyocha nke abụba, sesamol (100 na 200 mg / n'arọ) achọpụtara n'ụzọ dị mkpa (P <0.05) belata absorption nke triacylglycerol wee belata ọkwa nke triacylglycerol na ahụ. Triacylglycerol bụ ihe bụ isi nke abụba echekwara na anụ ahụ adipose.
N'ime nnyocha banyere ụmụ oke Switzerland albino na hyperlipidemia a na-ebute, sesamol supplementation na 50 na 100 mg / kg kọọrọ iji belata ogo nke cholesterol na triacylglycerol nke ukwuu.
Ọrụ nke sesamol na-ebelata cholesterol na triacylglycerol ọkwa bụ maka ikike ya iji belata nsị ahụ yana ịbawanye nsị nke cholesterol.
[i]. Sesamol na-erite uru anụ ahụ
Akpụkpọ anụ mmadụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro njikọ njikọta nke ọrụ ya bụ inye nchebe na akụkụ ahụ.
Sesamol na - erite uru anụ ahụ n'ụzọ dị iche iche n'ihi ike ya nwere ike gụnyere antioxidant, yana ọrụ mgbochi mkpali. Sesamol na-erite uru anụ ahụ site na
· Ikpuchido akpụkpọ ahụ site na ụzarị ọkụ ultraviolet (UV)
Ogologo oge na ìhè anyanwụ nwere ike iduga n'ọdịdị na-adịghị mma nke ụdị oxygen na-arụ ọrụ (ROS), nke nwere ike ibute mmebi anụ ahụ dị ka mmebi nke collagen na dermis na hyperplasia nke epidermis.
Sesamol nwere ike iwepụta ihe ndị nwere onwe ha na-eme n'ihi ogologo oge na ìhè anyanwụ wee chekwaa akpụkpọ ahụ site na mbibi DNA. Ọ na-enye mkpuchi mkpuchi nke na-enyere aka igbochi akpụkpọ ahụ ka ikuku UV ghara imebi ya.
Nnyocha na-akọ na sesamol nwere ike belata UVB-irradiation-induced cytotoxicity. A na-akọkwa na ọ na-egbochi melanin biosynthesis site na iweda okwu nke tyrosinase, MITF, TRP-1, TRP-2, na MC1R na melan-a cell.
Nnyocha ọzọ chọpụtara na sesamol nwekwara ike igbochi njikọ melanin site na ịmetụta CAMP / protein kinase A (cAMP / PKA), protein kinase B (AKT) / glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) / CREB, TRP-1, na MITF na B16F10 sel
· Nyere aka ịnọgide na-enwu gbaa anụahụ
A maara Sesamol na ọ bụ ezigbo antioxidant. Ọ na-abanye n'ime anụ ahụ si otú ahụ na-edozi anụ ahụ. Nke a na-enyere aka na-enwu gbaa anụahụ.
· Na-ewepụ ihe otutu
Acne bụ ọnọdụ nke mmanụ, unyi, na ụfọdụ ụmụ nje na-emerụ ahụ.
Sesamol nwere antibacterial Njirimara na-enyere ya aka tufuo nke microorganisms otú ị ga-esi anụ free nke ihe otutu.
· Enyele mgbochi ịka nká mmetụta
Ka nká bụ usoro nke ndụ na-aga n’ihu. Agbanyeghị ịka nká nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ihe dịka ịmịkọrọ ụzarị ọkụ UV, nrụgide oxidative n'etiti ndị ọzọ.
Sesamol na-enye ọrụ dị ike nke antioxidant nke na-egbochi anụ ahụ na ahụ site na mkpụrụ ndụ ihe nkedo na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ.
Achọpụtakwara Sesamol iji gbochie ihe omume, pores, na wrinkles.
[j]. Sesamol bara uru maka ntutu
Mmanụ sesame na-edozi isi, ntutu isi, na akụ. Nke a na - akwalite uto ntutu dị mma. Ọ na-enye aka n'ịgwọ ọrịa ntutu isi ọ bụla mebiri emebi site na kemịkal n'oge ọgwụgwọ ntutu ma ọ bụ dyeing.
Grayfụchasị ntutu isi tupu oge eruo nwere ike ime n'ihi ikike nwere ike belata nke anụ ahụ iji mee melanin zuru oke, yana ihe ndị ọzọ dịka nrụgide oxidative, ụdị ndụ mgbanwe mkpụrụ ndụ tinyere nri yana ị drugụ ọgwụ.
Mgbakwunye Sesamol egosila na ọ ga-enwe ike ịchekwa agba ntutu yana ime ka isi awọ awọ.
E wezụga nke ahụ, sesamol nwere ike inyere aka wepụ dandruff. Dandruff nwere ike ime n'ihi akpụkpọ anụ, mmeghachi omume nfụkasị na ngwaahịa ntutu, na ero ero na isi ya n'etiti ihe ndị ọzọ. Sesamol na-enyere aka zụọ anụ ahụ wee si otú a mee ka ntutu dị mma wee si otú a gbochie ndapụta nke dandruff. Ọrụ antibacterial na-ahụkwa na ntutu dị n'isi nke ụmụ nje na-ebute dandruff.
Methodszọ atọ nke sesamole
①. Mwepu sitere na mmanụ Sesame
Sesamol Nchịkọta sitere na mmanụ Sesame bụ nke kachasị mfe n'ime ụzọ atọ. Agbanyeghị, ọ na-akwụ ụgwọ dị ukwuu. Ya mere, usoro a adighi nma maka mmeputa ulo oru, karia n'ihi ugwo mmeputa di elu.
②. Ihe njikọ sịntetik nke sitere na piperamine
Ọ bụ ezie na ọ bara ezigbo uru maka sistemu Sesamol buru ibu, ụzọ dum maka njikọ sesamol sitere na piperamine na-emetụta maka nrụpụta pere mpe mgbe ejiri hydrolysis na usoro hydrolysis rụọ ọrụ. N'ọnọdụ dị otu a, a gaghị aghazi iwepụta ụcha ụrọ dị ka nsonaazụ na mmeghachi omume n'akụkụ.
③. Ọkara ụzọ sịntetik nke sitere na jasmonaldehyde
Emizọ Semi-sịntetik na-esite na jasmonaldehyde bụ usoro sistemụ sesame phenol na-ejikarị dị ka ebumnuche ọrụ. Usoro a na-etinye oxidation na hydrolysis na n'ihi nke ahụ, sesame phenol na-esite na-adị mma ma nwee nnukwu agba.
Usoro a na - eji oxidant na - emepụta ihe na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ, na - enyere ikewapụ ngwa ngwa nke ngwaahịa site na mpaghara mmịpụta. Nke a na-ebelata ohere nke mmeghachi omume n'akụkụ na-emetụta nke ọma. Ka a sịkwa ihe mere ngwaahịa ikpeazụ (nke na-acha ọcha dị ka kristal) dị nke dị elu na agba na sesamol njupụta.
Ebee ka zụta sesamol
Sesamol ntụ ntụ dị na ntanetị site na dị iche iche sesamol ndị na-emepụta ihe. Imirikiti ndị ọrụ sesamol na-azụta site na dị iche iche weebụsaịtị, ụfọdụ maka mkpọsa ma ọ bụ ire ere.
Nyochaa izi ezi nke ọ bụla sesamol emeputa iji iwu steeti akọwapụtara tupu ịzụrụ.
Joo Yeon Kim, Dong Seong Choi na Mun Yhung Jung “Ọrụ Antiphoto-oxidative nke Sesamol na Methylene Blue- na Chlorophyll-Sensitized Photo-oxidation of Oil” J. Agric. Nri nri., 51 (11), 3460 -3465, 2003.
Kumar, Nitesh & Mudgal, Jayesh & Parihar, Vipan & Nayak, Pawan & Nampurath, Gopalan Kutty & Rao, Chamallamudi. (2013). Ọgwụgwọ Sesamol Na-ebelata Plasma Cholesterol na Triacylglycerol Levels in Mouse Models of Acute and Chronic Hyperlipidemia. Lipids. 48. 633-638. 10.1007 / s11745-013-3778-2.
Majdalawieh, AF, & Mansour, ZR (2019). Sesamol, bụ nnukwu lignan dị na mkpụrụ osisi sesame (ntụgharị Sesamum): Njirimara mgbochi ọrịa kansa na usoro nke ime ihe. European Journal of Pharmacology, 855, 75–89.DOI: 10.1016 / j.ejphar.2019.05.008.
Ohsawa, Toshiko. “Sesamol na sesamol dị ka antioxidants.” Foodlọ Ọrụ Nri Ọhụrụ (1991), 33 (6), 1-5.
Sesamol Archived 2010-01-14 na backlọ Wayback na Chemicalland21.com
Wynn, James P.; Kendrick, Andrew; Nkume, Colin. “Sesamol dị ka onye na-egbochi uto na imeju metabolism na Mucor circinelloides site na ihe ọ mere na malic enzyme.” Lipids (1997), 32 (6), 605-610.